के भए हुन्छ डेंगु ? यस्ता छन् डेंगुका लक्षण र बच्ने उपाय - Dainikee News::
के भए हुन्छ डेंगु ? यस्ता छन् डेंगुका लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं, भदौ २३ । राजधानी काठमाडौंसहित देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगुले पाँच जनाको मृत्यु भइसकेकाे छ । यस राेगबाट अहिलेसम्म ७० हजार व्यक्ति बिरामी भएको अनुमान चिकित्सकले गरेका छन् ।
डेंगुका कारण पछिल्लोपटक शनिबार राति रूपन्देहीमा एक महिलाको मृत्यु भएपछि यस रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको हो । यअघि डेंगुबाट ४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशभर करीब २ हजार ६ सय बिरामीमा डेंगुको संक्रमण आशंका गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा करीब ११ सय जना छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ का ७५३ मा डेंगुको आशंका गरिएको छ ।
डेंगुबाट संक्रमित कपिलवस्तुको वाणगंगा-७ मोतिपुरकी ६१ वर्षीया सावित्रा आचार्यको उपचारका क्रममा शनिबार राति लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मत्यु भएको हो ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को तथ्यांकअनुसार सरकारी अस्पतालमा जँचाउन आएका बिरामी मात्रै वैशाखयता करिब ७ हजार छन् ।
निजी अस्पतालमा गएका तथा अस्पताल नै आइनपुगेका बिरामी संख्या जोड्दा करिब ७० हजार जना डेंगु संक्रमित रहेको अनुमान चिकित्सकको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४८ जिल्लामा डेंगु देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ २३, २०७६ /Monday, September 9th, 2019, 11:19 am